true integrity /zu-ZA/tools-for-life/integrity/steps/good-and-evil.html read 9 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/integrity_zu_ZA.jpg UbuQotho NokweThembeka
Kunemithetho emibili yokuphila ngokujabulisayo:
Bakwazi ukuzwa noma yini.
Yenza kuphela lezo zinto abanye abakwazi ukuzithola kalula.
Umuntu ube nemithetho eminingi yegolide (imithetho yokuziphatha okuhle). Umthetho wokuthi “Yenza kwabanye ngendlela ongathanda benze ngayo kuwe” uphindaphindwe kaningi. Kepha imithetho enjalo yegolide ayiholeli njalo ekuhlanzekeni kwengqondo, empumelelweni noma enjabulweni. Azinikezi ukucabanga ukuthi umuntu wenzani ngezinto ezenziwa kuye yilabo abangafundiswanga imithetho yegolide.
Uzisingatha kanjani izinto ezimbi ezenziwa kuwe?
Ukuze ujabule, kufanele ukwazi ukubhekana (okusho ukuthi, ukuzizwela) nalezo zinto ezikhona ukuze zibonwe noma zenzeke.
Ukungajabuli yilokhu kuphela: Ukwehluleka ukubhekana nalokho okumele ubhekane nakho.
Ngakho-ke kufanele ulandele umthetho: 1. Ukwazi ukuhlangabezana nanoma yini.
Incazelo yokuziphatha okuhle ukwenza kuphela lezo zinto abanye abangazizwela kalula futhi ngokunethezeka.
Uma uhlola okwedlule, uzothola ukuthi ukunaka kwakho kungabambelela kuphela kulezo zenzo ozenzile abanye abangakwazanga ukuzithola.
Ukwenza isibonelo, kwakukhona isikhathi, lapho wawuthukuthele, washaya umuntu ekhaleni. Noma kunesikhathi lapho uthathe khona ikhekhe lothile walidla ngokwakho ngaphandle kokutshela lowo muntu.
Izenzo eziningi umuntu azenza ezingeke zabonwa abanye, ziba zimbi ngokwedlule isikhathi somuntu. Ebona ukuthi wayenza izinto eziningi ezimbi, wayeka ukwenza izinto ngaso sonke isikhathi—isimo esingesihle sokuba.
Ubuhlungu, ukucasuka nobuhlanya konke kubangelwa ukudala izinto abanye ababengeke bazithole kalula.
Zonke izenzo ezimbi-ke, yilezo zenzo ezingenakutholwa kalula ngumuntu ozamukelayo.
Sisebenzisa le ncazelo, ake sibheke “izenzo zethu ezimbi” (overts). Yimaphi ayengalungile? Yilezo kuphela ezazingenakutholwa kalula ngomunye ezazizimbi. Ngakho-ke, iziphi izinto ezimbi zomphakathi ezimbi? Yizenzo zobudlova eziholele ebuhlungwini, ukungazi noma ukuhlanya, okwenza omunye umuntu alahlekelwe kakhulu, njengokulahlekelwa yimali yomuntu.
Yiziphi ezinye izinto zakho ozicabanga ukuthi “zimbi”? Izinto ozenzile ongakwazanga ukuzithola kalula zazizimbi. Kepha izinto ozenzile wena uqobo lwakho ongabhekana nazo, ukube zazenziwe kuwe, zazingezimbi.
Asikho isidingo sokuphila impilo yobudlova nje ukufakazela ukuthi ungathola okuhlangenwe nakho. Umqondo awukona ukukhombisa ukuthi ungathola okuhlangenwe nakho, kepha ukuthola ikhono lokuthola noma yini.
Ngakho-ke namuhla sinemithetho emibili yegolide yenjabulo:
Kwazi ukuhlangabezana nanoma yini.
Dala kuphela lezo zinto abanye abakwazi ukuzithola kalula.
Uma ulandela le mithetho emibili yegolide, uzoba ngomunye wabantu abajabule kakhulu futhi abaphumelela kakhulu emhlabeni.